China KN95 ဖုန်အသက်ရှူကိရိယာမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ VTECH
GB2626-2006 KN95 မျက်နှာဖုံး
CE / FDA အသိအမှတ်ပြု KN95 Respi ...
၅ Ply Filtration မျက်နှာရှီ ...
1.Disposable KN95 မျက်နှာဖုံးများ၊ အသက်ရှူနိုင်သော၊ ဖုန်မှုန့်တိုက်ခြင်း၊
၃.၅ ဒီဂရီသုံးဖက်မြင်ရှူနိုင်သောအာကာသမှ ၉၅% အထိစစ်ထုတ်နိုင်မှုထိသည်သင့်အတွက်ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။
3. အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလုံခြုံစိတ်ချရ။ ပျော့ပျောင်း။ သက်တောင့်သက်သာရှိသောအသားအရေကိုထိခိုက်စေသည်။
4. မြင့်မားသော elastic ရာဘာကြိုး၊ ချွေးစုပ်။ မတင်းတိမ်ပါ
5. လူမီနီယမ်နှာခေါင်းကလစ်၏ကွေးကိုလက်ချောင်းများနှင့်ကိုက်ညီအောင်ညှိပါ၊ အချည်းနှီးကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာများကိုရှူရှိုက်မိစေရန်လျှော့ချနိုင်သည်။
KN95 အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားသောနှာခေါင်းတံတား ဖော်ပြချက်:
2. ကာဗွန်၏အတွင်းပိုင်းအလွှာသည်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များသို့မဟုတ်အနံ့များကိုစစ်ထုတ်နိုင်သည်။ ၉၅% အထိစစ်ထုတ်နိုင်မှု၊ ၃၆၀ ဒီဂရီသုံးဖက်မြင်အသက်ရှူနိုင်သောနေရာသည်သင့်အတွက်ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။
KN95 အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံး - ပြင်ပနှာခေါင်းတံတားဖော်ပြချက် -
5 အလွှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး filter ကို
အရေပြားနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်အ ၀ တ်အထည်
အန္တရာယ်ကင်း 3s ပျော့ Non- ယက်ထည်
အထိ 95% filtration ထိရောက်မှု
သေးငယ်တဲ့ညစ်ညမ်းမှု၏ Electrostatic ထိစိမ့်
Ethylene-propylene filter ကိုရေမြှုပ်
100% ES, insulator တွင်လည်း, အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူ
PP Non- ယက်အထီးကျန်အလွှာ
၁။ မျက်နှာဖုံးမ ၀ တ်ခင်သင့်လက်ကိုဆေးကြောပါ။ သို့မဟုတ်မျက်နှာဖုံးကို ၀ တ်နေစဉ်မျက်နှာဖုံးအတွင်းပိုင်းနှင့်သင်၏လက်ကိုမထိပါနှင့်။
၂။ မျက်နှာဖုံး၊ အပြင်၊ အထက်နှင့်အောက်ဘက်တို့ကိုရှင်းလင်းစွာခွဲခြားပါ။
၃။ မျက်နှာဖုံးကိုလက်ဖြင့်မညှပ်ပါနှင့် KN95 mask သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမျက်နှာဖုံးပေါ်၌သာသီးခြားခွဲထုတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် mask ကိုလက်ဖြင့်ညှစ်လျှင်ဗိုင်းရပ်စ်သည်၎င်းမျက်နှာဖုံးကိုမျက်ရည်စက်များဖြင့်စိုစေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မျက်နှာဖုံးနှင့်မျက်နှာကိုကောင်းမွန်သောကပ်ကပ်မှုဖြစ်စေရန်ကြိုးစားပါ။ ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းမှာ - မျက်နှာဖုံးကိုတင်ပြီးနောက်အလွန်ပြင်းထန်စွာရှူရှိုက်ပါနှင့်မျက်နှာဖုံး၏အစွန်းမှလေသည်မစီးနိုင်ပါ။
၅။ အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးသည်အသုံးပြုသူမျက်နှာနှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့ရမည်။ အသုံးပြုသူသည်မျက်နှာဖုံးနှင့်နီးကပ်စွာချိတ်ထားနိုင်စေရန်မုတ်ဆိတ်ကိုရိတ်ရမည်။ အဆိုပါမုတ်ဆိတ်နှင့် pad ပါတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်မျက်နှာအကြားဘာမှမျက်နှာဖုံးယိုစိမ့်စေပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့သို့ KN95 အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံး
နောက်တစ်ခု: White Ear-loop Disposable Protective 3D Face Mask
မျက်နှာဖုံးစက်ဘီး Kn95 2.5
ပါးစပ် Facemask Kn95
Non- ယက် Kn95 မျက်နှာဖုံး
3D နူးညံ့သော Breathable PM 2.5 KN95 မျက်နှာဖုံး
အရည်အသွေးမြင့်မားသော 5ply KN95 မျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်နှစ်ခုနှင့်အလွှာများ ...
VTECH တရုတ်, LTD မှ။ KN95 အကာအကွယ်ပေးသည့်မျက်နှာဖုံးကိုကျွမ်းကျင်စွာထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင်ဖုန်မှုန့်ကင်းသည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု၊ ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့်အချောထုတ်ကုန်များအတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောသိုလှောင်မှုစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။
Changzhou 213138, China, Xinbei District, Wangjiang Road အမှတ် ၂၈